गीत गाउँदा गाउँदै स्टेज बाट तल खसे अलिफ खान यस्तो भयो भिडियो हेर्नु होला ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
गीत गाउँदा गाउँदै स्टेज बाट तल खसे अलिफ खान यस्तो भयो भिडियो हेर्नु होला !
आज बुधवारदेखि बिजुलीमा नयाँ महसुल लागू भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको गएको कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार आजदेखि विपन्न परिवारलाई फाइदा हुने गरी नयाँ महसुल कार्यान्वयनमा आएको हो । नयाँ महसुलअनुसार महिनाको २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने घर परिवारले बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्ने छैन, ३० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क तिरेमात्रै पुग्नेछ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुभएका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमै २० युनिटसम्म उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट शुल्क नलिने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।